Tonga ny hevitra voalohany momba ny 'famonoana Halloween' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Tonga ny hevitra voalohany momba ny 'famonoana Halloween'
Tonga ny hevitra voalohany momba ny 'famonoana Halloween'
by Trey Hilburn III Septambra 11, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 11, 2021 5,212 hevitra
Mamono ny Halloween naseho tamin'ny Fetiben'ny sarimihetsika Venice ary nihaona tamina fanasan-dàlana tsy dia misy dikany firy amin'ny fomba tsara. Noho izany, ny fihenan-tena betsaka, raha ny marina, dia nanahirana ahy kely aza izany. Matetika aho mitondra ireo zavatra ireo amin'ny sombin-sira fa ny isan'ny olona tsy tafiditra ao akory dia somary manaitra.
Taorinan'ny fandefasana sary dia nandatsaka bitsika ny bitsika izay nanolo-kevitra indrindra fa somary korontana amin'ny ankapobeny ny sarimihetsika. Ny tena marina dia "korontana" no nampiasain'izy ireo. Hita be ilay teny. Toy izany koa ny "fan boy" sy ny "service fan".
Jereo ny fomba fanao tsara hijerena lohalika vitsivitsy amin'ireo horonantsary izay tonga teo aloha, fa rehefa lasa famerenana ilay loharano ilay horonantsary mba hamenoana adiny 2 amin'ny famintinana tsy tapaka, tsy izany ve no tadiavintsika.
Toa be ihany koa ny fanehoan-kevitra milaza fa tsy eo fotsiny ny tsatokazo ary kely izany dia tsy afaka mamindra ny fitantaran'i Strode sy Myers. Ny vaovao tsara dia ny ankamaroan'ireto olona ireto milaza fa avo tokoa ny isan'ny famonoana ary tsy mitombina ny fihenan-tsainy. Ka afaka miandry an'izany farafaharatsiny isika.
Ny lohahevitry ny alahelo sy ny trauma ary ny toe-tsain'ny vahoaka tsy misy saina koa dia toa lohalaharana amin'ireo fanehoan-kevitra ireo.
Amin'ny lafiny ratsy indray, isa marobe no miakatra amin'ny laharana 2.5 ary nahita mpivady 1 avy amin'ny 5 aza. Nisy vitsivitsy 4 tamin'ny 5 fa tsy ampy handavana tanteraka ny fanahiana.
Ny iray amin'ireo fanambarana manahirana indrindra ary toa hita taratra amin'ny tsikera marobe dia tonga tao amin'ny David Reporter, David Rooney, izay mpanao gazety ao amin'ny Hollywood, izay nilaza fa:
Tsy afaka ny tsy hahatsapa aho fa Venice no toerana tsy mendrika hamonoan'ny mpikomy. Tsy re akory izany, saingy tsy afaka ny hahatsapa izany Mamono ny Halloween mety ho nanao zavatra tsara kokoa tamin'ny festival iray karazana, toa an'i Fantasia na Fantastic Fest.
Mampiahiahy anao ve ireo fiatraikany ratsy teo aloha ireo? Ho afaka hahita ny tenanao ianao rehefa Mamono ny Halloween mandefa sinema manomboka amin'ny 15 Oktobra.